रास्पबेरी पाईलाई धन्यवाद एक विशाल थ्रीडी स्क्यानर बनाउनुहोस् नि: शुल्क हार्डवेयर
अरुडिनो भनेको के हो?
तिनीहरूले रास्पबेरी पाईलाई एक विशाल थ्रीडी स्क्यानर धन्यवाद सिर्जना गर्दछ
जोआक्विन गार्सिया कोबो | | 3D मुद्रण, रास्पबेरी Pi
थ्रीडी प्रिन्टि ofको विश्व छिटो बढ्दैछ। जे होस्, हालको थ्रीडी प्रिन्टि 3D थ्रीडी मोडेलहरू पाउँदा र तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्नेमा आधारित छ। अर्को शब्दहरूमा, तपाइँ प्राय: मौलिक थ्रीडी मोडेलहरू सिर्जना गर्नुहुन्न। यसको लागि प्रयोगकर्ताहरूले वस्तु स्क्यानर प्रयोग गर्छन्। तर यदि हामीसँग वस्तु स्क्यानर छैन भने के गर्ने? के हुन्छ यदि हामी ठूलो वस्तु स्क्यान गर्न चाहन्छौं? हामी के गर्छौ?
बेलायती निर्माताले समाधान फेला पार्न मद्दत गरे। यस निर्मातालाई बोलाइयो पोष्ट मोसब्याकरले एक मानव थ्रीडी स्क्यानर बनाएको छ। यो ग्याजेट उसको कम्पनी, एक फेशन कम्पनीको लागि सिर्जना गरिएको हो जुन द्रुत थ्रीडी मोडेलहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
पपी मोसब्याकरले थ्रीडी स्क्यानर फ्रि हार्डवेयर र नि: शुल्क सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको छ। यस पटक उसले अर्डिनो परियोजनाबाट बोर्डहरू प्रयोग गरेको छैन तर रास्पबेरी पाईबाट बोर्डहरू प्रयोग गरेको छ। विशिष्ट राइसबेरी पाइ शून्य प्रयोग गरेको छ पी क्यामको साथ.
बोर्डहरूको यो सेटले २ 27 पटक यसको प्रतिलिपि बनाइसकेको छ, अर्थात स्क्यानरले २ Ras रास्पबेरी पाई शून्य बोर्डहरू र २ Pi पाइक्यामहरू प्रयोग गर्दछ जुन सम्पूर्ण विशाल संरचनामा वितरण गरिन्छ। यो विशाल संरचना बनाईएको छ गत्ता ट्यूबहरू र केबलहरूको साथ ती सबै बोर्डहरूलाई एकल उपकरणमा जोड्नुहोस् जुन सर्भरको रूपमा काम गर्दछ। यो विशाल थ्रीडी स्क्यानर अपरेट गर्न प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर हो अटोकेड रीमेक, एक सफ्टवेयर जसले थ्रीडी मोडेल सिर्जना गर्न छविहरू प्रक्रिया गर्दछ।
भाग्यवस यो विशाल थ्रीडी स्क्यानर हामी नक्कल गर्न सक्छौं र आफैलाई बनाउन सक्छौं सिर्जनाकर्ताले यसलाई अपलोड गरेको हुनाले Instablesables रिपोजिटरी। यस भण्डारमा हामीले एउटा कम्पोनेन्ट गाईड, एउटा निर्माण गाइड र सबै पाई शून्य बोर्डहरू काम गर्न सबै आवश्यक सफ्टवेयर पाउँछौं। पाइ शून्य बोर्डहरू प्रायः कम-पावरको रूपमा ख्याति हुन्छन् र त्यो केस हुन सक्छ, तर तिनीहरू निश्चित रूपमा धेरै उपयोगी छन्, कम से कम अन्तिम प्रयोगकर्ताका लागि। तिमीलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » तिनीहरूले रास्पबेरी पाईलाई एक विशाल थ्रीडी स्क्यानर धन्यवाद सिर्जना गर्दछ
हामीले १०० क्यामेराको साथ थ्रीडी स्क्यानर बनाएका छौं।
कोआनलाई जवाफ दिनुहोस्
डेल्टाक्वाड, स्वायत्तताको १ kilometers० किलोमिटर होमोलोगेट सक्षम एक ड्रोन
BASF ले डच फिलामेन्ट निर्माता Innofil3D को नियन्त्रण लिन्छ
हार्डवेयरमा भर्खरको लेखहरू पाउनुहोस्।
अंग्रेजी परीक्षणपरीक्षण क्याटलानस्पेनिश क्विज